यस्ता श्रीमती जसले श्रीमानलाई कहिल्यै प्रगती गर्न दिनैनन् ! « गोर्खाली खबर डटकम
श्रीमान्लाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन । श्रीमानहरु परिवारको लागि म र्न तयार हुन्छन । आफ्नो श्रीमानलाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन ! उक्तकुरा बिभिन्न अध्ययनबाट समेत प्रमाणित भएको छ।
‘लोग्ने स्वास्नीको झ गडा परालको आगो’ भन्ने त भनाई नै छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच सामान्य ठाकठुक पर्नु दाम्पत्य सम्वन्धकै एउटा हिस्सा हो । तर, जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन !
यसको मतलब सामान्य झग’डा गर्नै हुदैन भन्ने होइन श्रीमन श्रीमती भएपछि सामान्य ठाकठुक त भइ नै हाल्छ । सम्बन्धलाई दिगो र रमाइलो बनाउने हो भने मनमा तुष पालेर बस्नु पनि हुँदैन । मनको कुरा आफ्नो जोडीसँग पोखिहाल्नुपर्छ । यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग खुल्ला दिमागले राम्रोसँग बोल्न सक्नुभयो भने सम्बन्धमा प्रगाढता आँउछ । तर अनावश्यक ‘किचकिच’ गर्नु हुदैन ।
तर कहिलेकाहीँ हुने स-साना झग’डापछि तपाईंलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ र यसले तपाईं आफ्नो प्रेमलाई अर्को तहमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ ।
पार्टनरको कुनै बानी तपाईंलाई नराम्रो लाग्छ भने आँखा चिम्लिदिन सजिलो हुन्छ । तर पनि यदि तपाईं त्यो बानी सुधारियोस भन्ने चाहनुहुन्छ र राम्रो नतिजा ल्याउनको लागि सामान्य झ गडा बेहोर्न तयार हुनुहुन्छ भने यो चाँहि तपाईंको साँचो मायाको संकेत हो ।
हाडभित्र रहेका टिस्यु शरीरका अन्य ‘टिस्यु’सँग मिलेर आफैं हर्मोन बनाउने र अन्य अं गसम्म संकेत पुर्‍याउने काम गर्छन् । त्यसबाट बुढ्यौली रोक्न र स्मरणशक्ति बढाउन सहायता प्राप्त हुन्छ । प्राध्यापक कारसेन्टीका अनुसार, बुढ्यौली लाग्न नदिन शरीरमा ओस्टियोकाल्सिन बढाउनुको विकल्प छैन । नियमित कसरत गर्दा हाडहरू आफैंले ओस्टियोकाल्सिन बनाउन थाल्छन् ।
आफ्नो घरमा राख्नुहोस् यी पवित्र चीज, सदैव मिल्छ धनकी देवी लक्ष्मीको कृपा
भर्खरै विबाहित दु लहीले जे ह र्कत गरे थाहा पाउँने सं सारका सबै च कित !